CDMA 800 MHz for Internet Setting + Dial-up Software ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Mobile Software » CDMA 800 MHz for Internet Setting + Dial-up Software
By နေမင်းမောင်8:24 PM9 comments
phone win August 18, 2011 at 5:28 PM
yang yong qing January 1, 2012 at 8:26 PM
GSM ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်နည်းကိုလည်း တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အ၇မ်းကျေးဇူးတင်တယ်၊
ဗမာ့သွေး April 3, 2012 at 8:41 PM
yooneimchit April 26, 2012 at 3:06 PM
GSM ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်နည်းကိုလည်း တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
OS Java ဖုန်းတွေအတွက် software လေးတွေကိုလည်း တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
Andriod ဖုန်းတိုင်းအင်တာနက်သုံးလို့၇ပါသလား။ZTE-C N760 modern တွင်အင်တာနက်သုံးလို့၇ပါသလား။ဖုန်းအမျိုးစားမှာAndriod ဖြစ်ပါသည်။
gotegwat September 11, 2012 at 8:03 PM
downloads ဆွဲရင် ilivid. exe ဖိုင်ပဲကြလာတယ်။ဘာဆက်လုပ်ရမှာလည်းပြောပြပါ။မြန်မာက သိတဲ့အတိုင်း ကွန်နယ်ရှင်မကောင်းဘူး။
brother how to do root blackberry 9860 smart phone i cannot use other app and internet can u help me please....
Please re-upload Dial-up software . Or you can send it to my mail noopykyaw@gmail.com. Thanks